Izinhlamvu French: abesifazane enhle likhala
Njengabangaqondakali kungase kuzwakale, kodwa bangaki abantu French asilazi elingenamikhono kazwelonke izikhali, ngoba bakholelwa ukuthi kuyinto esifuze esidlule. Amatshwayo eyinhloko France, ngokombono wabo, ungowesifazane, lily kanye iqhude. Lokhu kungase kubonakale kuxaka, kodwa zinikezwe wendawo sengqondo ke iyamukeleka ngempela. Ikhaya umqondo kazwelonke abakhileyo kuleli zwe kuyehla kube imiqondo emithathu: ukulingana, inkululeko welibhola letinyawo. Kuyinto ba abaye kungukufanekisa owawusekelwe umfanekiso noMarianne - intombazane wehlela emlandweni njengoba uphawu edume kunazo France. Ekhanda lakhe egqoke cap Phrygian, elalimi ngoba kulingana nenkhululeko phakathi French Revolution.
Lolu phawu yethulwa ngo 1792. Kusukela ngaleso sikhathi, i-Marianne kwaduma kakhulu phakathi Okugweda zendawo abaculi. Ngaphezu kwalokho, bas-imifanekiso, busts ngisho isithombe nge isithombe yakhe yaqala ibekwe ezindaweni zomphakathi. Esikhathini yoma kwekhulu leminyaka elidlule, umfanekiso French saphela collective angenazo izici zobuntu. Khona-ke iKomidi iziMeya, kwanqunywa ukuthi izinhlamvu French kufanele zinakwe naleso sakhamuzi yezwe. Ngezinye izikhathi ezahlukene logo yezwe, izitembu, imiqulu kahulumeni kuvezwa abesifazane abadumile isiFulentshi, ababe abethuli, tinkhulumo, abadlali. Baze kubalwa zemali. Uphawu lokuqala lensikazi iFrance Brizhit Bardo. Ngizizwa ngihlonipheke uyakufanelekela wakhe efana uwela Mirey Mate Katrin Denev, Ines De la Fressange, Letitsii Kasta, u-Evelyn Thomas, Sofi Marso.
Lily - uphawu yokubusa kwamakhosi
Iphendula umbuzo yini imbali - uphawu yeFrance, kufanele kuphawulwe ukuthi lily wakhethwa zale ndima ezinsukwini yokubusa kwamakhosi. Ngokusho yetinsita, lesi sitshalo ukulondolozwa ibutho lenkosi uClovis futhi wamsiza uwine i mpi obalulekile. Phakathi nokubusa Louis lily seTjhumi kwaduma ikakhulukazi. Yena kutshalwa ngempumelelo futhi wasebenzisa ukuze ukuhlobisa zabesifazane zezinwele, izindawo, ezitaladini nokunye. Izimbali ayekhona yonke engadini. Ngenxa yalokhu ezweni lonke yagcwalisa iphunga emangalisayo emnandi.
Cocky iqhude gallic
Izimpawu waseFrance akunakwenzeka ukuba sicabange ngaphandle iqhude gallic. Ngokomlando, amaRoma, wona bafika ezweni wendawo, ngokuthi i-redheads abakhileyo Halle (cocks) ngenxa yokufana kuya eponymous inyoni kwekhanda. Lapho leli zwe isidlulile inguquko futhi amakhosi ohlanga lanqotshwa inzalo Gauls, ukuthi wakhethwa ngoba indima uhlamvu kazwelonke. Nakuba isithombe sikaMarianne wabekwa uphawu isimo Republic, amaqhude gallic waqala kwenziwe izinhlamvu zawo novoproizvedonnyh. Ekuqaleni, lezi izimpawu eFrance kwakusho siqaphile, futhi kamuva kancane abazihlanganisa ugqozi kazwelonke kanye nomdlandla. Isithombe umlingiswa omusha wabonakala phezu izindondo ngoba kokufaneleka lempi, abandayo izingalo steel nezibhengezo yempi. Akunakwenzeka ukuba uqaphele yokuthi esikhathini nezemidlalo we French kazwelonke lebhola ngaso sonke isikhathi ukhona kuyadingeka indawo iqhude gallic.
Indlela ukushintsha isikhundla yezikhulu ekhulwini le-17 e-Russia?
Kale Kale - yasendulo futhi ewusizo leaf yemifino
I-Concor Cor - imiyalo yokusetshenziswa